Tantara an'ny orinasa Porsche
Cars & Motorcycles Fiara Exotic
Ny Ray: Dr. Ferdinand Porsche
Ny tantaran'ny orinasa Porsche dia nanomboka ela talohan'ny niheveran'i Ferdinand Porsche ny fanombohana ny orinasam-barotra manokana. Amin'ny maha injeniera tanora azy, dia nanamboatra ny fitaovana elektrika voalohany / gazoline izy - tamin'ny taona 1900. Niara-niasa tamin'i Daimler, Mercedes, Daimler-Benz, Volkswagen, Auto Union, ary ny hafa nandritra ny efa ho 50 taona izy. Ny orinasam-panofanana tsy miankina azy dia tompon'andraikitra tamin'ny famoronana ny Volkswagen Beetle tamin'ny taona 1931.
Zanaka: Ferry Porsche
Toa mety ny nipetrahan'i Ferry nandritra ny fihazakazahan'ny rainy. Rehefa nihalehibe izy, dia lasa mpanao sary an-tsoratra sy mpamily fanandramana tao amin'ny orin-drainy izy, saingy izy no tena nampiasa azy tamin'ny famolavolana Porsche voalohany, ilay 356 - izay niasa nandritra ny 20 volana tany am-ponja tao Dijon , Frantsa, ho toy ny mpanao heloka bevava ady. Nosamborina ihany koa i Ferry saingy navoaka tsy ela. Mba hanamafisana orina ny fianakaviana, dia nanamboatra fiarabe fiara izy ary ity fiara fanatanjahantena Porsche voalohany ity.
Ny Porsche 356 voalohany dia nanana volavolan-dalan'ny Volkswagen 40 volombo-koditra, ary nipoitra avy any amin'ny toerana rehetra izay ahitan'ny orinasa azy ireo, ity taorian'ny ady Eoropeana. Nanome baiko dimy tamin'ireo fiara i Zurich, Soisy, any Soisa, izay natsangana teo amin'ny foiben'ny orinasa any Gmund, any Aotrisy. Herintaona taorian'ny fiara voalohany nandao ny orinasa dia 356 no nahazo ny hazakazaka voalohany. Ny modela dia niditra tamin'ny famokarana tsy tapaka tamin'ny taona 1950, ary tamin'ny 1954 dia nampidirina haingana kokoa ny dikan-teny.
Ny 3500 faha-1000 dia nanongana ny laharan'ny fivoriambe tamin'ny taona 1956, ary nanaraka ny 356B tamin'ny taona nanaraka.
Famoronana ilay Ikonna: Fahaterahana ny 911
Tsy sahala amin'ireo orinasa fiara hafa fiara, ny ekipa Porsche dia nirotsaka an-tsehatra kely, na dia nodimandry tamin'ny faha-76 taonany tamin'ny faha-76 taonany i Ferdinand Porsche. Nahita ny sambon-danitra tamin'ny 1963 izy ireo: 911.
Ny design dia antsoina hoe 901, fa ny fiara fitambarana tamin'ny 1964 no nantsoina tamin'ny fomba ofisialy hoe 911. Nisy fiarakodia enina milimetatra roa litatra izay namoaka 130 hp, mihoatra lavitra noho ny teo aloha. Targa, semi-automatique, avo lenta ary fidirana an-dàlam-pandrefesana manaraka ao anatin'ny folo taona.
Ho an'ny Nines
Tamin'ny 1965 i Porsche no namarana ny famokarana 356, fa ny môtera kosa niaina tamin'ny 912 ambaratonga voalohany. Izany dia nosoloina tamin'ny alàlan'ny 914 tamin'ny taona 1970, ary tamin'ny 1976, ny 924 izay niasa tamin'ny alàlan'ny fiara fitaterana Audi dia nisolo ny 914. Ny 928 vaovao dia nipoitra tamin'ny 1978 tamin'ny 240-hp V8. Ny 944, izay nivarotra tamin'ny 1982, dia niorina tamin'ny 924, fa ny modely vaovao kosa dia manana motera efatra-cylinder Porsche. Ny Supercar 959 dia nipoitra tamin'ny fiaramanidina fiara tamin'ny Frankfurt tamin'ny 1985, ary tamin'ny taona 1987, ny 9000.000 911 no nanapaka ny tsipika. Ampy ho an'ny olona ny maniry ny fiara miaraka amin'ny anarana fa tsy ny laharan'ny tetikasa.
Raha niparitaka tamin'ny fiara Porsche ny fiara fanatanjahan-tena ho an'ny vahoaka dia nandresy tamin'ny hazakazaka manerana izao tontolo izao ny hazakazaka. Tamin'ny taona 1951, kely 356 SL no nandresy tamin'ny Le Mans, ary tamin'ny 1956, ny 550 Spyder dia nandresy ny fandresena tamin'ny ankapobeny, tao amin'ny Targa Florio. Ny taona 1960 sy 70 dia nahitana andian-dalamby nandritry ny hazakazaka 1000-km Nurburgring, ny 24 ora Daytona , ny seranan'i Can-Am, ary ny World Championships of Makes.
Ireo taona 1980 dia nahita fandresena tamin'ny 911 Carrera 4x4 sy ny 959 tao amin'ny hetsika tao Paris-Dakar,
Ny lanjan'ny mpamokatra
Tamin'ny taona 1984 dia navoaka ampahibemaso i Porsche. Ny orinasa dia nokarakarain'ny fianakaviana Porsche sy Piech hatrany am-piandohana - Dr. Ernst Piech, vinantovavin'i Ferdinand Porsche - ary nitazona 50% n'ny anjara ho an'ny tenany izy ireo. Mazava ny famokarana, nanohy namoaka fiara matihanina ambony i Porsche tamin'ny isa marobe: ny 911 dia nahatratra ny marika 250.000 tamin'ny taona 1987. Nanolotra ny sori-dalan'ny boky "Tiptronic" tamin'ny 1990 ny orinasa, fanavaozana iray izay nitana azy manokana efa ho roa am-polony taona talohan'ny nisoloana ny rafitra PDK roa-clutch tamin'ny 2009 911 Carrera. Tamin'ny 1988, 50 taona taorian'ny nanorenana ny 356, maty i Ferry Porsche.
Miverina amin'ny fotony
Ny taona 1990 tany ho any dia saika ratsy ho an'ny mpamokatra fiara ara-panatanjahantena ho toy ny krizin'ny gazetin'ny taona 1970, ary mety ho tratran'ny orinasa lehibe kokoa i Porsche.
Ny Dr. Wendelin Wiedekin, izay lohan'ny famokarana teo aloha, dia niditra tao amin'ny CEO ary nifantoka tamin'ny fampandrosoana teo amin'ny 911 tsy afaka nandalo. Ny Boxster midina milanja-basy dia nampidirina tsy ela taorian'izay, ary najanona ireo modely modely teo aloha. Ho fanomezam-boninahitra ny fahamendrehana vaovao, ny iray tapitrisa Porsche dia naorina tamin'ny Jolay 1996. Tamin'ny faran'ny taona 2008, ny orinasa dia nanao ny hetsika ho an'ny orinasa manaraka tamin'ny alalan'ny fividianana ny ampahatelon'ny volan'ny Volkswagen.
Fiara telo an'ny fiara sy SUV
Na dia mitombo be aza izy dia manana modely fototra efatra i Porsche: 911 Carrera, Boxster, Cayman, nampidirina tamin'ny taona 2006, ary ny Cayenne fanatanjahan-tena SUV, izay niasa tamin'ny taona 2007. Ny Porsche Panamera vaovao no nanombohana voalohany ho modely tamin'ny taona 2010. Taona am-polon-taona maromaro no misy ny lisitra misy amin'izao fotoana izao, mampihodina ny lela toy ny fiara manala ny famokarana any Stuttgart.
Tantaran'ny orinasa Bugatti
Vehivavy ao amin'ny sarimihetsika 'Ny Joba Italiana'
Ny Hazo Italiana: Tantaran'i Ferrari
Fiovan'ny herin'ny maotera amin'ny fiara tsy mataho-dalana
Ny tantaran'i Maserati
Ny fiara tsara indrindra ampiasaina maherin'ny $ 50,000
Olana dimy goavana amin'ny fizika physika
Ny torolàlana ofisialin'ny mpamorona ho an'ny torolàlana TV
Ireo zokiny lehibe indrindra tamin'ny taona 1977
Inona ny hafanam-be ara-pahasalamana mitovy amin'ny Celsius?
Famaritana sy ohatra amin'ny toetr'andro ara-tsosialy
Joseph Urban, Mpamorona ny Mpanakanto
Ny fomba fanodinkodinam-pandrefesana
Fijerena ny fahitana mivantana
Iza ny Hindoa?
Fiovam-po roa eo amin'ny baolina kitra
Toetran-dranomandry atsimo, Toasty warm tamin'ny 90 segondra
Ahoana ny fomba ahitanao ny mari-pahaizana momba ny fifandanjana amin'ny fizarana
Tendrombohitra Vinson: Tendrombohitra avo indrindra any Antarctica
Fangatahana ireo mpankafy ny mpankasitraka
Teny alemana mba hanalavirana: Glossary manokana Slang
Mampiasà media sosialy hampianatra ny Ethos, Pathos ary Logos
10 Songs Easy Country Afaka mianatra amin'ny guitar ny olona rehetra
Lisi-pinoana sy satanika momba ny Kristianisma